Gud H/shaqalaha Iyo Wasiirku miyanay ogayn in liiska shaqaluhu xafiiskooda yaalo. | Somaliland One
January 23, 2018 - Written by Wararka Maanta
Waa sax in dowladu kormeerto shaqalaheeda lakiin waxay leedahay nadaam Iyo hab maamuus dowladnimo oo aan ahayn arin siysadeed.
Dowladu waxay taqana liiska shaqalaha rasmiga ah ee mushaharka qaata oo ka shaqalaysiisan xafiisyada hayadaha dowlada oo leh xidhiidh masuuliyadeed oo ilaa heer qaran ah.
Waxaan u arka in aan khibrad Iyo shaqo wanag midna ka muuqan kabka hayadaasi oo qaranka ugu fadhida kalin mihiim ahi u shaqaynayso Iyo Gud sharmarke oo ah wiil dhalinyaro oo shiqsiyan iga mudan ixtiraam wayn ahna wiil aad u firfircoon waa nadaamka madaxka kowga shaqalaha dowlada sidda uu ugu yeedhay.
Nadamka dowladnimadu u wada xidhidha/ sharciga kormeerka hayadani waa ka duwan yahay sidatan i arkaay i maqlaayda ah. Wasiirka cusub Iyo agasimaha wasarada midna ku cananmaayo qabkan wayo maba garanayaan balse Sharmarke isaga ayey dhaliil ku tahay sidatani, mudo ayaanu xafiiskan jogay oo maha masuul la kowsaday
Madaxweyne ha cusub madama u aqoon ahaan matali karo booskan.
Shaqadatani waxay khusaysa shirkadaha Iyo hayaadka aan dowliga ahayn si loo ogado inta shaqaysa guud ahaan dallka balse qaabka kormeerka, tayeysiinta Iyo shaqalaysiintu ba waa ka duwan yihiin sidda in dhawayd ba wax u socdeen sharciga shaqalaha dowlada ee dalka.
Waxay ila tahay in ay mihiim tahay tayada Iyo shaqo wanaga hayadan wasaradeeda mihiimna ay u tahay madaxweynaha cusub si ay ugu suurto gasho himiladiisa shaqo wanag Iyo shaqo abuur.